इसाईकरण र माओवाद | नेपाल दर्शन
इसाईकरण र माओवाद
१. विश्वभर ४,००० जति साम्यवादीलाई पश्चिमा इसाई मुलुकले लगानी गर्दछन्; विद्रोह जन्माउँछन् र कमजोर पारेर आफ्नो स्वार्थ साधन भएपछि क्विज्लिङ् गराउँछन् । चीन शक्तिराष्ट्र बन्दै गएकाले विश्व नेपालमा एकत्रित भएको छ। हुन त यो कुरा दार्जिलिङ र केरला केन्द्रित इसाई अभियानमा निर्मल लामा मार्फत् नेपालका साम्यवादी (माले, मशाल, एमाले, एकता केन्द्र, माओवादी) को ढोकाभित्र छिरेको हो। सन् १९५० मै सिआइएले नेपाललाई जातीय युद्धमा फसाउने रणनीति बनाएको (हेर्नुहोस्- जोहन केनेथ न्याउस : शीतयुद्धका टुहुरा) थियो। ७४ वर्षपछि त्यो योजना नेपालमा तातेको छ। तिब्बतलाई केन्द्र बनाएर चीनलाई कमजोर बनाउन यो नीति कार्यान्वयन भएको छ।
माओवादीहरू हिन्दुधर्म विरोधी र इसाईका प्रवर्तक छन् । अहिले उग्र क्रिस्चियन प्रचारकमा तिनै माओवादी छन् । ती तलबी कार्यकर्ता हुन् । मुक्तिनाथ, नारायण पोखरेल लगायतका सयौंजनाको हत्यादेखि पशुपतिका पुजारी हटाउनेसम्म यही रणनीतिबाट भएको थियो। टाईलाई राष्ट्रिय पोशाक बनाउने काम पनि त्यही आधारमा भएको हो।
२. बालअधिकार, गरिबीनिवारण, मानव-अधिकार, महिला सशक्तीकरण, प्रजातान्त्रीकरण, समावेशी प्रजातन्त्र, जातीय सङ्घ, संविधान, उपलब्धि संस्थागत जस्ता नामले गैसस मार्फत् अरबौं डलरको लगानी छ- दलमाथि हिन्दुधर्म मास्न । ती गैसस तिनै दलका मात्र छन् । धनको लोभमा तिनै दलले इसाईको आदेश शिरोपर गरेका छन् । तिनले लोकतन्त्र होइन, डलरतन्त्र, भ्रष्टाचारतन्त्रको काम गरेका छन् ।
माओवादीले माओको विचार विरुद्ध देशभक्ति परित्याग गरेका छन । बेलायतमा बस्ने रिमका अध्यक्ष बव आबाकियन साम्यवाद होइन इसाईवाद
परिचालन गर्दछन् । नेपालका कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको खोल ओडेर गैसस मार्फत् धर्म, सभ्यता र संस्कृति विनाश गराउन उद्यत छन् । २०४६/४७ सालमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ भनेर इसाईले प्रदर्शन गरे । गीतामन्दिरमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसको समर्थन गरे। २०५२ सालमा माओवादीले पेश गरेको ४० बँदेमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ भनेर माग गरे । गोरखाको लुइँटेल इसाई स्कुलकी प्रिन्सिपल एलिरले इसाईकरण गर्न सिकाएका पाठ सफल गराएको भनेर प्रम भएपछि ५०,००० रुपेयाँको पारितोषिक दिएर सम्मान गरेकी थिइन्।
रिम कृस्चियानीकरण गर्ने अर्को तरिका हो। नेपालमा क्रिस्चियन मण्डलीले जातिवादको पक्षमा गरिएको सहयोग दुराशययुक्त छ ; रिम नीतिमा आधारित छ। १२ बुंदे दिल्ली सम्झौता साम्यवादको परित्याग र पूँजिवादी इसाईकरणमा समर्पण हो।
३. क्रिस्चियन मिसन र माओवादी बिच गहिरो साँठगाँठ रहेको छ । भारतको बालाजित नगर, मोतीबाघ र मेरौलीमा यिनीहरूका साङ्गठनिक काम हुन्छन् । त्यहाँ एक हजारभन्दा बढी धर्मप्रचारक माओवादी छन् । तत्सम्बन्धी पत्रिका दिशाबोध र दिशा निर्देशको वितरण यिनीहरूले नै गर्ने गर्दछन् । पनाहरूले कुनै धर्म त मान्दैनौँ भन्दछन् तर धनका लागि क्रिस्चियन बनेका छन् । एउटा छोटो समय पाए सुन्दर उद्यान भत्काउन पुगिहाल्दछन् । भत्काउन धेरै समय लाग्दैन । धनको कमी छैन; खुवाए पुग्छ ।
नेपालका माओवादीबारे 'क्रिस्चियन लवीमा नेपाली माओवादी' भारतका सन्ध्या जैनले लेखेका छन- "बाबराम भट्टराई र उनका लर इसाई सम्प्रदाय ग्रहण गरेका छन । उनका गरु चन्द्रप्रकाश इसाइ पादरी हुन् । ४२ हजार लडाकुमध्ये ३० प्रतिशत इसाई छन् । तर " इसाई हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तो कुरामा पनि नेपाली मिडिया चूप रहनु आश्चर्य लाग्दो छ। बाबुराम पढेको मिसन स्कुलबाट नै उनलाई प्रशिक्षित गराइएको थियो । उनकी माध्यमिक शिक्षा मार्फत् उनलाई विश्व मिसनरी मिसनसँग सम्बन्ध बढाइएको थियो र त्यही मार्फत् उनले नेपालमा हिन्दु राजा हटाउने र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गराउने शर्तमा नर्वेमार्फत् करोडौं करोड सहयोग प्राप्त भयो । उनका उच्चशिक्षा गुरु एस.डी.मुनी मार्फत उनी 'रअ'सँग आवद्ध भएका थिए।
५. माओवादीले इसाईको नुनको सोझो देखाउन युद्धकालमा गाईगोरुको मासु खाए, खुवाए। टुपी पाल्ने हिन्दुको टुपी काटिदिए। कर्मकाण्डको काम गर्ने पुरोहित र गुरुसँग भएका धर्मग्रन्थ खोसेर पोलिदिए। मृत परिवारका आफन्त काजक्रिया गर्न बसेका व्यक्तिलाई अपहरण मात्र गरेनन् तिनको हत्या पनि गरिदिए । सुदूर पश्चिमका देवी पूजामा बली दिएका राँगाको मासु खाने जातलाई इन्कार गर्न लगाए। यहाँ सामन्त पोपले तेस्रो चौथोदेखि बाह्रौं-पन्धौं शताब्दीतिर गर्ने गरेका सबै खाले अत्याचार गरिए।
६. नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गराउन पनि माओवादीलाई प्रयोग गरियो। गणतन्त्र गराउन पनि माओवादीलाई नै प्रयोग गरियो । सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था र जातीय पहिचानको नारा पनि इसाईको नै नारा हो । त्यतिमात्र होइन नेपालको झण्डामा हिन्दुत्व झल्कने भएकाले त्यसलाई पनि फेर्न लगाइयो। तिनीहरूले झण्डा फेर्ने प्रस्ताव पनि राखे। माओवादीले हुन सकेसम्म गरे तर केही नलागेर राष्ट्रिय झण्डा बदलिएन। लबेदा सुरुवालले नेपालको मौलिक राष्ट्रिय पोशाकका पहिचानलाई पनि राजाले लगाउने तथा हिन्दुत्व झल्कने भनेर इसाईले त्यसलाई हटाउन लगाए। माओवादीले हटाए। आजसम्म सत्तामा बस्दा तथा औपचारिक काम गर्दासमेत कुनै पनि माओवादीले विशुद्ध नेपाली पोशाक लगाउँदैनन । उनीहरूको राष्ट्रिय पोशाक इसाईहरूको टाइनै कायम भएको छ। नवा जातीय राज्यका केही मानिसको दवाबमा भक्तपुरे कालो टोपी लगाएर साखुल्ले भए । इसाईका पक्षमा गरिएका कामलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर हेर्दा माओवाद, कार्लमार्क्स र लेनिनका बिचारलाई पनि छाडेर इसाईका हितमा काम गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा माओवादी, भौतिक मोहवादी, सामन्तवादी स्वरूपका देखिन्छन् । उनीहरूको तथाकथित जनयुद्ध खर्चको ठुलो अंश मिसनरीबाट प्राप्त भएको प्रस्टिन्छ । उनीहरू कम साम्यवादी बढी इसाई प्रचारक देखिएका छन् । इसाईको धनबाट सत्ता हत्याउने सपना बाहेक अरू केही देखेका छैनन्।
त्यसो त पश्चिमाले विश्वभरि साम्यवादी पतन गराउनेदेखि सत्तामा बस्नेहरूलाई कठपुतली बनाउने काममा विद्रोही, आतङ्ककारी जत्था, असन्तुष्ट समूहलाई धन प्रलोभन दिएर हात लिन्छ र काम फत्ते गर्ने गर्दछ । सोभियत रुस, चेकोस्लोभाकिया आदिलाई त्यसरी नै पतन गराइएको हो। अब चीनमा त्यही काम गरिरहेको छ । यस्ता जत्थामध्ये विश्वभर ४,००० जति त कम्युनिष्टहरू नै छन् जसलाई पश्चिमाले लगानी गरेर हुर्काएका छन् । बिन लादेन पनि अमेरिकाले हुर्काएको विद्रोही हो। जब काबुबाहिर जान्छ त्यसलाई क्विज्लिङ गरिन्छ । बिनलादेन पनि त्यसैको सिकार भए । अन्त्यमा सबै कम्युनिष्ट सिकार हन्छन ।
७ माओवादी र इसाईको प्रवृत्ति उस्तै उस्तै हुन्छ। इसाई प्रिस्ट (Omalur Christian priests) ले दर्जनों हिन्दु बालिकाको बलात्कार र समलिङ्गी मैथुन गरेका छन् । यो हिटलरले यहुदीलाई गरेजस्तो अपराध हो। वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा वकालत गर्नेलाई कुनै न कुनै विडम्बना गर्ने गरिन्छ।
श्रोत: नेपालमा इसाइका चलखेल
डा.शास्त्र दत्त पन्त